Fahatsiarovana an’i Gholamreza Takhti, Mpanao Fanatanjahantena Be Mpitia Indrindra Tao Iran Nifampitolona Tamin’ny Shah · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Janoary 2017 18:38 GMT
Gholamreza Takhti (afovoany) ao anatin'ny sary iray tsy nisy daty tao Iran. (Loharano Wikimedia Commons)
Manamarika ny tsingerintaona nahalasanan'ny iray amin'ny atleta maherifon'i Iran indrindra ny andron'ny 7 Janoary, Gholamreza Takhti no anarany. Tsy teo amin'ny sehatry ny zavabitany ara-panatanjahantena ihany, izay nahazoany ny medaily volamena teo amin'ny sehatra manerantany ihany no miavaka ny zavabitany fa teo amin'ny fanetre-tenany sy ny fotokevitra ara-politikany ary ny tolona ho amin'ny fahafahana tamin'ny fanoherana ny didi-jadon'ny Shah ihany koa. Manamarika ny tolon'ny vahoaka iraniana, izay maro no nanao sorona ny fiainany milamina sy feno fanambinana noho ny fotokevitra nananan'izy ireo, ny fiainany sy ny fahafatesany.
Teraka tamin'ny taona 1930 tao amin'ny fianakaviana mahantra iray tao Tehran, hitan'i Takhti vetivety tao amin'ny fanaovana tolona ny lalam-piainany izay nahatonga azy ho atletan'i Iran manan-talenta indrindra. Tamin'ny taona 1950 izy no nahazo voalohany ny maha-tompondaka iraniana azy ary tamin'ny taona 1956 no nahazoany medaily volamena olaimpika.
Nahazo ny anaram-bositra hoe “Pahlevan” (tompondaka) izy noho ny zava-bitany mahazendana, noho ny fahamendrehany ary ny toetrany mendrikaja, fantatra teo amin'ny toetrany mahay manaja ihany koa i Takhti na tao anatiny na teo ivelan'ny ringy (na kidoro) fanaovana ny taranja tolona. Ny fironany ho eo amin'ny rariny sy ny hitsiny no nahazoany fanajana avy amin'ny mpifanandrina aminy sy ny fitiavana avy amin'ny daholobe. Tafiditra amin'izany ny tsy fanekeny hanararaotra ny faharatran'ny mpifanandrina aminy, sy ny fikarakarany azy ireny sy ny fianakaviany amin'ny fanajana feno.
Na dia tsy manam-pahazoa aza ny zavabitan'i Takhti amin'ny maha-mpanao tolona azy, dia ny hetsika ara-politika nataony no nahatonga azy ho olomanga ao Iran.
Mpanohana ny Dr. Mohammad Mossadegh sy ny ezaka nataony ho fananam-panjakana ny akoranafon'i Iran sy ny fahazoana ny fahaleovantena i Takhti. Io fanohanana io matetika no mahatonga azy hifampihafahafa amin'ny Shah. Raha nisy ny horohorontany tao Qazvin tamin'ny taona 1962, dia i Takhti tenany mihitsy no nitarika ezaka fanangonam-panampiana ho an'ny mponina, ary nidifiany ny ezaky ny Shah hanao fanangonam-bola ho amin'izany. Izany fihetsika feno fihantsiana ny didijadona izany no nitarika an'i Takhti hanana ny lazan'i Robin des Bois teo amin'ny sarambambem-bahoakan'i Iran.
Indrisy fa ny fanoheran'i Takhti ny fitondrana ihany koa no nahavoa azy. Tamin'ny 7 Janoary 1968 no nahitana ny vatana mangatsiakany tao amin'ny efitry ny trano fandraisambahiny iray. Nolazain'ny manampahefana fa famonoantena no nahafaty azy, saingy ny fikatrohana ara-politika nataony no nampihevitra ny maro fa lasibatra sy novonoin'ny SAVAK, polisy miafin'ny Shah, izy.
Lanonam-pahatsiarovana ny faha-45 taonan'ny fahafatesan'i Gholam-Reza Takhti tamin'ny taona 2013 notontosaina tao antanimasajan'i Ibn-e Babouyeh atsimon'i Tehran, nandevenana azy. Sary avy amin'ny Mehr News.
Marika manandanja teo amin'ny lasa sy ankehitrinin'i Iran ny tanjaka anaty mbola tsy voatrandraka tao amin'i Takhti sy ny fijoroany mifahatra tsara tamin'ny fotokeviny. Maro ny zavatra lasa sorona teo amin'ny Iraniana tamin'ny tolona nifanandrinan-dry zareo tamin'ny Shah, ary avy eo nangalarin'i Khomeini ny revolisionan-dry zareo. Fa mbola mitohy ho fakana aingam-panahy eo amin'ny taranaka hoavy hijoro sy hiady ho amin'ny finoany [fotokeviny] sy handà ny fiainam-piadanana anoloan'ny tsy rariny sy tsy hitsiny ny nataon'ny olomanga tahaka an'i Takhti.
Tsy tokony ho amin'ny maha-atleta tsy mampino azy ihany no hahatsiarovana an'i Gholamreza Takhti, fa amin'ny maha-olombelona feno azy izay nampiasa ny talenta sy ny fahasoavana manokana azony hanampiana ireo tsy nanam-bintana sy hiady amin'ny tsy rariny sy ny famoretana. Olomanga natao sorona teo amin'ny lalandavitra sy nitohy tao Iran nizotra ho any amin'ny fahafahana sy ny demaokrasia i Takhti.
Ny sombin-dahatsoratra dia nivoaka voalohany tao amin'ny Iran Focus